I-China 4 TON 4 × 4 Izinguquko ezine ze-Forklift Umkhiqizi kanye Nomthengisi | UWilk
WIKIloli eli-4 lamasondo e-forklift linokushayela okugcwele amasondo amane, okuthuthukisa kakhulu amandla e-forklift. Yimoto yobunjiniyela ekwazi ukwenza ngokuphepha nangendlela efanele ukusebenza kokulayisha impahla, ukwehlisa, ukuqoqa futhi ukuphatha imisebenzi emhlabathini ongalingani njengodaka, izinkambu nezintaba. Inokusebenza okuhle ngaphandle komgwaqo, ukusebenza okudlulayo nokuhamba kahle. Ingathatha indawo yokunamathiselwe okuhlukahlukene ukuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi. Izinsiza zokulayisha nokuthula impahla ezikhungweni zokusabalalisa impahla ezinezimo zomgwaqo ezingezinhle njengezikhumulo zezindiza, amachweba neziteshi.
WIK Izinzuzo ezine zamaloli we-forklift yeloli:
1. Ukubukeka okuhle, ukwakheka okuhlangene, indawo encane ephendukayo, ukusebenza okulula nokuguquguqukayo, kungasebenza esikhaleni esincane, isiteringi esigcwele samandla wokubacindezela, isondo lokuqondisa nesihlalo i-angle eguquguqukayo kanye nendawo yaphambi nangemuva kwesihlobo, ukukhulisa izidingo zomuntu siqu zomshayeli .
2. Amasethingi wezinjabulo ezahlukahlukene alungiswa ngokuya ngezidingo ze-ergonomics ukunciphisa umfutho wabasebenzi nokwenza ngcono ukukhiqiza kahle.
3. I-wide view mast, umshayeli unombono obanzi, ngakho-ke le forklift ilungele kakhulu ukulayishwa nokulayishwa, ukuthungwa kanye nokuhamba amabanga amafushane ensimini nangaphandle.
(1) Inokudlula okuhle futhi idonsa ngawo wonke amasondo. Akukho mehluko phakathi kwama-ekseli namathayi amakhulu wobubanzi obusemgwaqeni osetshenziswa ngobubanzi obukhulu. Ukususwa okuncane komhlaba emotweni kungaphezu kwama-300mm kanti i-angle yokuhamba ingaphezu kuka-30 °.
(2) Sebenzisa uzimele ocacisiwe. I-engeli yokujikisa yozimele ngokuvamile ± 30 ° ~ 40 °. Uhlelo lokuqondisa lulula futhi aludingi ama-asi ama-steering drive abizayo. Ingafinyelela i-radius encane yokujika, isebenzise isondo lokushayela ukugoqa ifreyimu ngokuvundlile, futhi yenze imfoloko ibe lula ukuqondanisa Okwezinto zokwakha, okwenziwe ngamatshe amafoloki amancane anethani elincane, ifreyimu ebalulekile ingasetshenziswa, nge-axle drive eyodwa nokukhiya okwehlukile ku-asi ye-drive.
(3) Ukubhreka kwamasondo onke. Ngaphandle kwama-forklifts amathani amancane asebenzisa amabhuleki ezicathulo akhulisa, iningi lawo ngamabhuleki e-caliper disc, kanti amanye ama-forklifts asindayo nawo asebenzisa amabhuleki amanzi. Ibhuleki yokupaka ibhuleki lesandla elizimele kakhulu.
(4) Kwama-forklifts we-2t ~ 3t ashiwo ezweni eliwela, ama-ekseli angaphambili nangemuva ajwayelekile.
(5) I-ekseli langemuva le-forklift enqamula ezweni ligxiliswe kufreyimu, futhi i-asi ye-front ingashintsha ngokuthe nkqo ± 8 ° ~ 12 ° maqondana nohlaka. Isilinda se-hydraulic esisekelayo sisethwe phakathi kohlaka ne-ekseli langaphambili. Lapho i-forklift iphakamisa, imasti yokuphakamisa igcinwa isesimweni se-plumb lateral ngokulawula isilinda se-hydraulic; lapho i-forklift ishayela, amakamelo aphezulu nangaphansi we-hydraulic cylinder avunyelwe ukudlula emigodini ye-damping collude, enenzuzo yokwenza ngcono ukuhamba kahle kwemoto.
(6) Kukhona i-wheelbase enkulu ne-wheelbase. Khulisa ukuzinza okuqondisayo nokweside kwe-forklift.
(7) Ukuhamba okuhle. Ijubane elikhulu lemoto ngokuvamile (30-40) km / h. Isici samandla singaphezu kuka-0,65, ukushesha kokushayela kuhle, futhi kunekhono lokukhuphuka elingu-25 ° ~ 30 °.
(8) I-engeli enkulu yensika. Lokhu kuyadingeka ekusebenzeni okuphephile nasekushayeleni emhlabathini ongalingani, imvamisa kungu-10 ° ~ 15 ° ngaphambili no-15 ° emuva.
(9) Ukuhlelwa kwesihlalo somshayeli. Ukuqinisekisa ukuthi opharetha unombono ongcono ngesikhathi sokulayisha imisebenzi, isihlalo somshayeli sibekwa phambili phambili. Okwezimfoloko ezibekiwe, zibeke kuhlaka lwangaphambili ngangokunokwenzeka.
WIK Imingcele ehlobene neloli ye-4 wheel drive:
Umthwalo Kulinganiswe ngo (kg)
Ukukhishwa kokuphakama (mm)
Ikhwalithi yemoto (kg)
Ubukhulu bokukhuphuka (°)
“Ukuhamba ngamasondo amane”
Mast ngaphambili imvume (mm)
Isikhungo se-wheelbase sitholakala emhlabathini (mm)
Ubuncane bejika engaba (mm)
Amandla enjini (kW)
Sebenzisa uzimele ocacisiwe. I-engeli yokujikisa yozimele ngokuvamile ± 30 ° ~ 40 °. Uhlelo lokuqondisa lulula futhi aludingi ama-asi ama-steering drive abizayo. Ingafinyelela i-radius encane yokujika, isebenzise isondo lokushayela ukugoqa ifreyimu ngokuvundlile, futhi yenze imfoloko ibe lula ukuqondanisa Okwezinto zokwakha, okwenziwe ngamatshe amafoloki amancane anethani elincane, ifreyimu ebalulekile ingasetshenziswa, nge-axle drive eyodwa nokukhiya okwehlukile ku-asi ye-drive.
I-ekseli elingemuva lemoto enqamula ezweni ligxiliwe ohlakeni, kanti i-asi yephambili ingashintsha ngokuqonde ngqo kufreyimu ± 8 ° ~ 12 °. Phakathi kozimele ne-ekseli langaphambili kufakwa isilinda esisekela ngo-hydraulic. Lapho i-forklift iphakamisa, imasti yokuphakamisa igcinwa isesimweni se-plumb lateral ngokulawula isilinda se-hydraulic; lapho imoto isebenza, amakamelo aphezulu nangaphansi we-hydraulic cylinder ayenziwa Ukuhlanganiswa ngomgodi wokudambisa kusiza ukuthuthukisa ukunethezeka kwemoto.
Iloli eliyi-4 wheel drive forklift neline-chassis enamandla lisetshenziselwa ukulayishwa nokulayishwa kwemishini ezindaweni zokusabalalisa izinto ezinezimo zomgwaqo ezingezinhle njengezikhumulo zezindiza, amachweba neziteshi. Inokuhamba okuhle nokusebenza kwasemgwaqweni kwezimoto ezijwayelekile ezingekho emigwaqeni kanye nokusebenza kwezimboni kwezimfoloko ezijwayelekile. Kungathiwa inhlanganisela enamandla. Ijubane le-forklift engaphandle komgwaqo liphakeme kunele-forklift ejwayelekile, ekhombisa ukuthi ukuhamba kwayo nakho kuhlukile ukuze ikwazi ukuzivumelanisa kangcono nendawo yokusebenza. Umzimba ubanzi, ongathwala imithwalo engajwayelekile futhi ebanzi; ukuvunyelwa okukhulu okuvela phansi ukusiza izingqinamba zokuwela esizeni; umsebenzi oshayelwa ngamasondo amane ukuqinisekisa ukusebenza okujwayelekile endaweni enodaka, ukwenza ngcono imishini yokusebenza, nokukhipha amandla amakhulu namakhulu eBreaking, ukulinganisa okuzenzakalelayo kokuthulula, ukusebenza kahle komsebenzi omkhulu nokusetshenziswa kukaphethiloli okuphansi.
I-4 wheel drive forklift iyithuluzi eliyinhloko lokulayisha nokuthulula imisebenzi ngaphansi kwezimo zensimu. Inokuhamba okuhle kwezimoto ezijwayelekile ezingekho emgwaqeni kanye nokusebenza kwezimboni kwezimfoloko ezijwayelekile. Amasondo okushayela ngokuvamile asebenzisa i-herringbone, iphethini ejulile, nezimoto ezibanzi ezinqamula ezweni. Amathayi. Idivaysi yokudlulisa ifakwe ukhiye ohlukile noma indlela eshibhile yokuqinisekisa ukuthi amathayi ayo yonke imoto azosheleka emgwaqweni omanzi. Ngokwesakhiwo, ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi imoto ngeke iginqike ngaphansi kwezimo zomgwaqo, ngenkathi ihlangabezana namandla okuphakamisa imoto. Ukuqinisekisa ukusimama kwemoto eceleni ngokukhulisa i-wheelbase, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukuphepha komshayeli, imoto nempahla
I-4 wheel drive forklift isebenzisa ukudluliselwa kwamasondo amane. Amasondo angaphambili nangemuva aqhutshwa ngamandla. I-torque yokukhipha yenjini ingasatshalaliswa kuwo wonke amasondo angaphambili nangemuva ngezilinganiso ezehlukene ngokuya ngezimo zomgwaqo ezihlukile. Inama-anti-skid amadivayisi, ukwakheka kwenjini kanye no-gearbox. Ihlangene futhi ingasebenza emigwaqweni eyinkimbinkimbi efana nemigwaqo yasendle, intaba, kanye nodaka. Amasondo ngeke ashelele kalula lapho izimo zomgwaqo zimbi. Ukudluliswa kwamandla kudluliswa kakhulu nge-hydraulic noma i-hydrostatic transmission, enokuhamba okuhle nokuhamba kahle.
Langaphambilini I-3.5 TON 4 × 4 Ijika eline Forklift
Olandelayo: izici ezisemqoka zesakhiwo nokusetshenziswa kobuchwepheshe obuthuthukisiwe kulayishi we-WIK30-25 Backhoe